Miitatra eny amin ny fokontany ny fihoaram-pahefana
2010-03-14 @ 22:56 in Andavanandro
Tsy ny tsy mety izay ataon'ireo efa fandrentsika miteronterona eny amin'ny toerana avo no tiako tantaraina vetivety fa ireo eny amin'ny fototra kosa indray, izany hoe eny amin'ny fokontany sady eto an-drenivohitra mihitsy. Manjaka dia manjaka moa ny halatra tariby Jirama sy izay an'ny telma ka vaventiventy ankoatra izay mety ho halatra sy vakitrano isan-karazany any. Nisy aza moa fotoana fa nandrenesana poa-basy hatrany taty 67ha isan'alina ka nahatonga ny baiko hipetraka fa tsy maintsy mikatona ny Bar manomboka amin'ny sivy ora alina. Eo amin'ny halatra tariby moa efa nisy ny may teny ampangalarana tariby teny Soavina Atsimondrano teny. Dia avy ny sasany ka nanararaotra amin'ny lafiny fitiavana te-hahazo vola maika isam-bolana angaha.
Izaho dia miaina amin'ny fokontany iray amin'ny cité des 67ha. Ao anatin'ny fokontany iray dia misy quartiers maromaro na secteurs moa no filaza azy fahiny. Raha misy ny chef fokontany dia misy ihany koa ny chef quartier izay efa nofidiana taona maromaro lasa izay. Raha nisolo ny filohan'ny fokontany, tsy nosoloina kosa ny filohan'ny quartier. Taloha tany, rehefa be tamin'ny toerana fanariam-pako no nesorina fa navangongo tamina fanariam-pako somary lehibebe kokoa ny fako, dia nisy ny fifanarahana fa misy olona hanangona ny fako isan-tokantrano. Roanjato ariary ny fifanarahana voalohany fa efa dimanjato ariary izy amin'izao fotoana izao. Mitondra ny fako amin'ny boroety moa ireo olona azo atao hoe karamain'ny fokontany ireo. Dia misy ihany koa ny vola alaina hanadiovana ny tatatra isaky ny voalohan'ny taona, tsy dia lafo loatra ihany koa iny satria isan-taona ka tsy nampaninona ahy loatra fa ity tantaraiko manaraka ity no tsy aritro.
Indray mandeha, hono, tamin'ny faramparan'ny volana febroary 2010 iny... tena ataoko hono satria tsy nahare ny fisiany mihitsy aho... nisy fiantsoana fivoriana tampoka teto amin'ny quartier (singa ao anatin'ny fokontany fa tsy ny fokontany iray manontolo no lazaiko eto), tsy nisy na iray aza nanontaniako nahatadidy io fotoam-pivoriana io, eny fa na dia ireo nikarakara ilay fivoriana aza. Izao no natao: "Fivoriana izao dieny izao, ao amin'ny Tanimalalaka". Toerana efa fantatry ny rehetra izany fa ity no mahavariana. Tsy misy andraso andraso ilay fivoriana fa eo noho eo... tsy mifanaraka amin'ny hamehana anefa ny zavatra notapahina fa tetika hangalana na hitangosana vola ny tsirairay.
Resaka fandriampahalemana no anton'ny fivoriana. Nampanantsoin'ny tany ambonimboniny tany (atitany io) hoe ny filohan'ny quartier fa malaza dia malaza hoe izao halatra tariby Jirama eto 67ha izao ka nahazo fampitandremana ny fokontany, tokony hametraka na hanaitra ny olona hiambina isan'alina hoe. Izany hoe amin'ny atoandro miasa, amin'ny alina miambina, tsy misy ny fotoana atoriana ho an'ny lehilahy! Mazava loatra fa tsy misy ny hahavita izany ankoatra ny olona tanora na tsy misy atao loatra. Nilaza avy hatrany ny mpiteny fa efa misy tanora 26 vonona hanao izany fiambenana izany fa mba karakaraina kosa ry zareo; karazandrazany hoe karamaina izany. Natao avy hatrany ny tsanga-tanana raha manaiky ny handoa vola 3000ar isaky ny logement ny olona, ary dia zalahy vonona no nananga-tanana voalohany, miampy ny anabavy na sipan-dry zalahy, sy zaza tsy ampy taona maromaro teo, hoy ny afa-nanatrika. Raha nisy ny olona niteny fa tsy mety izany manapa-kevitra tampotampoka izany noho ny havitsian'ny olona tonga nefa idirana resa-bola dia kianina avy hatrany hoe ianao irery no tsy manaiky... izany hoe didin'ny tsy ampy taona sahady no iheverana azy nefa raharaha politika "visa A" no atao (polis=tanàna). Toy ny mpanoha-riana sy heverina ho fahavalom-bahoaka izany ireo izay mitady hiteny na hitsikera. Dia tapaka avy hatrany fa handoa 3000ar isam-bolana koa manomboka izao ny isaky ny logement.
Fa ity no mahatsikaiky : Efa fivoriana tampotampoka tsy nisy fampandrenesana mialoha izy ity, tsy nisy peta-drindrina tsy nisy megaphone ka kiririoka sy hoe mivory izao dieny izao no natao. Faharoa, tao anaty ora fiasan'ny mpiasa satria andavanandro no nanaovana ilay fivoriana, nokendrena mihitsy mba ho vitsy ny nanatrika fa ry zareo ihany no vavolombelona fa niarahan'ny besinimaro ny fanapahan-kevitra handoavana vola 3000ar isam-bolana. Fahatelo, ny fijerijerena ny taribin'ny Jirama ihany no asan-dry zalahy fa tsy misahana resaka halatra hafa izy... noho izany, tsy andraikitr'izy ireo raha misy ny vakitrano. Manaraka izany, tsy hisambotra ny mpangalatra izy ireo raha mahita fa ny mitsoka kiririoka ihany no ataony dia ny fokonolona no mandray adidy mifoha hisambotra ilay na ireo mpangalatra. Faramparany , angamba hatao mpiasa raikitra mihitsy izy ireo satria hoe handoavana fiantohana ihany koa ry zalahy. Ny tena nahasorena ny tena moa dia ry zalahy mieboebo amin'ny akanjo laoranjy avokoa, miseho ho tompontanàna irery, rehefa nitaky ny fandoa isam-bolana voalohany. Fanomezana asa ny TGV eto amin'ny tanàna izany izy ity nefa ny fokonolona iray manontolo no terena handoa ny karamany. Ahiako tsy hisy velively anefa ny tatitra ara-bola amin'izy ity.
Ny teto amin'ny quartier misy anay aza moa azoazo ihany izany tantaraiko izany ao anatin'izao tsy fanarahan-dalàna manjaka izao fa misy ny fokontany toy ny eny Andavamamba, misy olona mitaky vola 5000ar tampoka any an-tranonao satria tsy tonga nivory ianao. Ary natetitetika ilay fitakiana, ilay olona niresaka anefa tsy mahalala ny fisian'ilay fivoriana mihitsy na dia tsy niala teo amin'ny fokontany mihitsy aza noho ny hasembanana mahazo azy. Ny eto amin'ny misy ahy no fantatro koa asa re hanao ahoana ny any an-kafa any?
Jentilisa, alatsinainy 15 mars 2010 amin'ny 00:55 maraina